ဆန်နီနေမင်း: တိုင်းတာလို့မရနိုင်တဲ့ ဆွမ်းကပ်ပွဲလေး
(၂၉. ၀၆. ၂၀၁၂) သောကြာနေ့မှာ မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နကို အမှူးထား၍ တပည့်ဖြစ်သူ အရှင်ကောမလ(ခ)ဆန်နီနေမင်းမှ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာသံဃာ(၂၀၀)ကျော်ရှိရာ အဝေးရောက်သံဃာများကို ကားကြိုဖို့လုပ်ပြီး ဆွမ်းကပ်ခဲ့လှူတဲ့အတွက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ မြန်မာကျောင်း ဆွမ်းကပ်သက်တမ်းတစ်လျှောက် မကြုံဖူးသော သံဃာများကြွရောက်မှုကို တွေ့မြင်ရခြင်း၊ ဆန်ကီလို(၃၀)နဲ့ ဆီသန့်(၁၂)လီတာ မကုန်သဖူး ပြတ်လပ်ကာ ကုန်ခဲ့ခြင်း၊ ပုဇွန်တုတ်ကီလို(၃၀) မလုံလောက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ ဒိန်ချဉ်အိုး (၂၅)အိုး မလောက်သဖြင့် ဒိန်ချဉ်ဗူး(၅၀) ထပ်မံဖြည့်ပေးခဲ့တာကို မလုံလောက်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တောအရပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာများကပင် အရှင်ကောမလပင့်လို့လာတာဆိုပြီး ကြွရောက်ခဲ့ကြတာကိုပါ ဖူးမြင်ရလို့ စိတ်ထဲမှာလည်း အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပီတိ ကြည်နူးမိပါတယ်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးရှိ သံဃာများအားလုံးနီးပါး ဆွမ်းကပ်လေးကို ကြွရောက်ကြတဲ့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသံဃာများနဲ့ နာယကဆရာတော်များကပင် အရှင်ကောမလ ဆွမ်းကပ်ကတော့ စံချိန်တင်ရုံတင်မကဘူး။ စံချိန်ပါ ကျိုးတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုသံများကို ကြားရတော့လည်း မိမိထင်ထားတာထက် ပိုမိုလှူဒါန်းရတာပဲလို့တွေးတောကာ စိတ်ချမ်းသာမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇင်းလည်း သီရိလင်္ကာရောက်တဲ့(၂)နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ ဆွမ်းကပ်များစွာ ကြုံဖူးရသလို သူငယ်ချင်းများရဲ့ ဆွမ်းကပ်၊ ဒကာ၊ ဒကာမများရဲ့ ဆွမ်းကပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ဝယ်ပေးခဲ့တာ မှတ်မှတ်ရရ (၃)ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ(၃)ကြိမ်လုံးမှာလည်း ကုန်ချင်သလောက်ကုန်ဆိုပြီး ၀ယ်ခိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀၀) မကုန်ခဲ့ပါဘူး။ ခု ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းကပ်လေးမှာ လိုလေစိတ်မရှိဘဲ ပိုလျှံအောင်ဆိုပြီး ဒေါ်လာ(၆၀၀)ကျော်ဖိုး ပိုမိုကာ ဈေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သံဃာတော်များရဲ့ မိမိအပေါ် စေတနာထားမှုနဲ့ မေတ္တာထားကာ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးမှုတို့ကြောင့် မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုကာ ဈေးဝယ်ပေးထားသော်လည်း မကျန်တဲ့အပြင် မလုံလောက်အောင်ကို ပါ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဦးဇင်းရဲ့ သံဃာတော်များအပေါ် စေတနာထားပြီး ဒေါ်လာ(၁၀၀)ကျော် အကုန်ခံကာ ကားနဲ့အကြိုအပို့ စီစဉ်ပေးတဲ့ စေတနာကြောင့်လည်း ပါမယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်က စေတနာ မေတ္တာထားလို့ သံဃာတော်များကလည်း မိမိပေါ် စေတနာ မေတ္တာထားပြီး ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြတာပါလေ။
သံဃာတော်များ ဆွမ်းဘုဉ်းမပေးခင် နာယကဆရာတော်က ဆွမ်းအလှူရှင်နာမည်ကြေညာတဲ့အခါမှာ လည်း အရှင်ကောမလ(ခ)ဆန်နီနေမင်းဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များအား တရားဟောကြားပေးနေသလို ပြည်တွင်းမှာလည်း မေတ္တာရှင်ဆရာတော်နဲ့အတူ တရားတော် များ ဟောကြားပေးနေတဲ့ ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေါက်တာလောင်း လျာဖြစ်ကြောင်း ပြောတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုယ် ခြေလွတ် မတတ် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ထင်ထားတာထက် ပိုမိုချီးကျုးနေတာလို့ ထင်သွားခဲ့လို့ပါ။ ဒါနဲ့ နာယကဆရာတော်က သံဃာတော်များအား ဆွမ်းအလှူရှင် ကြေညာပေးပြီးနောက် မှာ သံဃာတော်များမှ ပရိတ်ရွတ်၊ မေတ္တာ ပို့သံများကို နာကြားရတဲ့အခါ ဦးဇင်းတစ်သက်တာတွင် မဖြစ်ဖူးခဲ့သော ပီတိများ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
‘’ အော်-ငါ ခု ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေကို အာရုံပြုလှူနေတာ။ သံဃာအားလုံးကလည်း ပရိတ်ရွတ်၊ မေတ္တာပို့နေတာဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်ပေါ်ကာ စိတ်ထဲမှာ တကယ့်ကိုပဲ မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းဒါနအတွက် ချီးမြှင့်ပေးနေတာပါလား”လို့ ၀မ်းသာပီတိတွေ လျှံတက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ငါ့ဘ၀မှာ အတိုင်းမသိသော ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်ရလို့ အတိုင်း မသိသော ကုသိုလ်များရရှိမယ်ဆိုတာ ထူးထွေပြောစရာလိုမယ် မထင်ပေ။
အဲဒီလို ၀မ်းသာပီတိများဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဦးဇင်းတစ်နေ့လုံး ဆွမ်းမစားဘဲ နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မနက်ခင်းကလည်း ကော်ဖီမစ်လေး တစ်ခွက်သောက်ပြီး ဈေးသွားလိုက်၊ လိုအပ်တာတွေ လိုက်လုပ်ပေးလိုက်၊ ကားစီစဉ်ပေးလိုက်၊ သိမ်းဆည်းပေးရနဲ့ တစ်နေ့သာကုန်သွားပါတယ်။ ဗိုက်ဆာခြင်းလည်းမဖြစ်၊ ဆွမ်းစားချင်စိတ်လည်း မပေါ်ဘဲ ပီတိနဲ့သာ ကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူများတကာတွေ ဘာမှမစားဘဲ ပီတိနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားရမှ အော်-ပီတိ အရှိန်ကြောင့် အစာမစားဘဲ နေနိုင်ကြတယ်၊ ပီတိဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်များတိုးပွားကာ တရားထူးတွေရတယ်။ ဈာန်ပျံနိုင်တာတွေဟာ ငါဖြစ်တဲ့ပီတိထက် သာလွန်တဲ့ပီတိမျိုး ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတောင် ဒီလိုအလှူလေး လုပ်လိုက်ရတာကို ပီတိဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လုံး ဘာမှမစားဘဲ နေနိုင်သေးရင် ငါထက်သာလွန်သော ကောင်းမှု များလုပ်တဲ့သူတွေဟာ ငါထက်အဆများစွာ ပီတိဖြစ်ပြီး များလှစွာသော ကောင်းကျိုးများရမယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်လို့ ရဲရဲကြီး ထောက်ခံနိုင်သွားပါတယ်။
ပုံမှန်နေ့မျိုးဆို မနက်ခင်း ဘာမှမစားရရင် နေ့ခင်းမှာ ဟင်းမကောင်းရင်တောင် နှစ်ပုဂံလောက် စားနိုင်ပါတယ်။ ခု ဟင်းတွေလည်း အရန်သင့်ရှိနေတာကို ဘာမှမစားချင်တာဟာ တော်တော်တော့ ထူးဆန်းနေတယ်လို့ ခံစားမိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိစိတ်မှာ အလှူဒါနအတွက် အတိုင်းမသိသော ၀မ်းသာမှုပီတိတွေကြောင့်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
အဲဒီလို သံဃာများအားလုံး ကြွရောက်ချီးမြှင့်ကြတာကို တွေ့မြင်ရတဲ့အခါ ဦးဇင်းတင်မကဘဲ လုပ်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသံဃာ(၄၀)ကျော်တို့ကပါ ၀မ်းသာပီတိတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လုပ်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ(၄၀)ကျော်ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပင်ပန်းစွာနဲ့ လုပ်အားပေးခဲ့ရပေမဲ့ သံဃာတော်များစွာ ကြွရောက်ပြီး အားရပါးရဘုဉ်းပေးတာကိုမြင်ရတဲ့အခါ သူတို့မစားရလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လာတဲ့သံဃာတွေကို ၀၀လင်လင်ဖြစ်အောင် ကုန်သလောက်ထည့် လိုက်ပေးပါဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ လုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ချီးကျုးမိခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ဦးဇင်းရဲ့ဆွမ်းကပ်ကို အဖက်ဖက်မှပြည့်စုံအောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသော သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့အား တစ်သက်တာမှတ်တမ်းထဲမှာ အမြဲထာဝရမှတ်ထားလျက် ကျေးဇူးတင်နေ လျက်ပါ။
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နနဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့အားလည်း ယနေ့ပြုသမျှ ကောင်းမှုအားလုံးကို သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ကြရန် အမျှ(၃)ကြိမ် ပေးဝေ လျက်ပါ….။ နောက်နောင် ထပ်မံလှူဒါန်းနိုင်ပါရစေလို့ ဆုတောင်းလျက်…။
ကြွရောက်လာသော သံဃာများအား နာယကဆရာတော်မှ ဆွမ်းအလှူရှင် ကြေညာပေးပြီး ပရိတ်မေတ္တာတရားတော်များ ချီးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားနေပုံ
ဆွမ်းဝိုင်းများ ပြင်ဆင်ပြီး အမှတ်တရ
သံဃာတော်များ ပရိတ်၊ မေတ္တာချီးမြှင့်မှုကို အလှူရှင် အရှင်ကောမလမှ နာကြားနေစဉ်
သံဃာတော်များ ပရိတ်၊ မေတ္တာချီးမြှင့်နေပုံ
လုပ်အားပေး သူငယ်ချင်းများမှ ပရိတ်မေတ္တာ ချီးမြှင့်ပေးနေပုံ
သံဃာတော်များ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေစဉ် အမှတ်တရ
သူငယ်ချင်းများ ဆေးကျောင်းသား ပြုလုပ်နေပုံ
မြန်မာ-နီပေါ ဆရာလေးများ လုပ်အားပေးနေပုံ
ပဲသီးသုတ် လက်စွမ်းပြ နှယ်နေပုံ
လိုက်ပွဲ ပုဇွန်ဟင်းနဲ့ တုန့်ယမ်းဟင်းချို
ပုဇွန်ခွာသူကခွာ၊ ကြော်သူက ကြော်နေကြစဉ်
မနက်စောစော ဟင်းချက်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်
နာယကဆရာတော်မှာ သံဃာများဆွမ်းစားကြွရန် တုံးမောင်းခေါက်နေပုံ
အိုက်တိုးပဂေးဆံ အဖွဲ့သားများ လုပ်အားပေးနေပုံ
ဒီလိုကားများနဲ့ သံဃာများအား ဆွမ်းစားကြွရန် အကြိုအပို့ လုပ်ပေးခဲ့တာ
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 2:32 PM
ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား စီပုံးမတွေ့လို့ ပိုစ့်အောက်မှာ မန့်သွားပါတယ် ဘုရား ။
ဒကာရေ C-box က အောက်ဆုံးမှာ ထားလိုက်တယ်လေ။ အဲဒါ ဒကာက အောက်ဆုံးရောက်အောင် မကြည့်လို့ မတွေ့တာပါ။
very delightful of sayar daw's donation.
Tar du tar du tar du par pha yar.
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား...နောက်နောင်လဲဒီထက်မကလှူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘဘရား။